Wadan Dadkiisu ay Soomi doonaan 24-ka saac maalin iyo habeen#Aqriso magaca+qaabka ay u af-furi doonaan | Xaqiiqonews
Wadan Dadkiisu ay Soomi doonaan 24-ka saac maalin iyo habeen#Aqriso magaca+qaabka ay u af-furi doonaan
Muslimiinta qaar ayaa maanta sooman halka kuwa kale ay soomi doonaan maalinta sabtida ah laakiin waqtiyada soonka ama saacadaha uu qofka soomi doono ayaa ka duwan wadanba wadanka kale.
Kala duwanaashiyaha saacadaha soonka ayaa ku xiran kala duwanaashaha xagga juquraafiyadeed ee wadadamada aduunka tusaale wadamada dhaca cirifka waqooyi ee aduunka ayaa waxa ay qorraxda soo jeedi doontaa 24-saac taasi oo ka dhigan in qofka muslimka ah uu soomi doono 24 saac sida sharciga ah.
Wadanka FInland oo ka mid ah wadamada yurub ayaa qorraxda waxa ay ka maqnaani doontaa 55 daqiiqo oo kaliya iyadoo 23-saac iyo 5-ta daqiiqo ee kale aya maalin ahaan doonto.
Muslimiinta ku nool dowladaha loo yaqaano Iskamdaniifiyanka ayaa soomi doono celcelis ahaan 19.48 saac halka muslimiinta ku nool ISlanad ay iyaga soomi doonaan saacdo dheer oo lagu qiyaasay 21 saac balse wadaadada muslimiinta qaar ayaa aminsan in dadka noocaaai ah ay ku af-furayaan waqtiga dalka ugu dhaw ee muslim ah waxaana intooda badan ay qaatan waqtiga wadamada Aasiya ee deriska la ah Yurub.
soomaaliya waxaa la filayaa in qorraxdu ay dhici doonto 5-ta galabnimo iyo 45 daqiiqo taasi oo ah in dadka sooomaaliya ay soomi doonaan 12 saac iyo 45 daqiiqo.